Masuuliyiin Soomaaliya iyo dunidaba caan ka ah oo isku khilaafay waxa laga yeelayo dadka Soomaaliyeed ee baaba . war bixin la xariirta hab dhaqanka Dowladda Liibiya ee …iyo waxa walaalka Soomaaligoow arrintaan kaala quman xal ahaan?
Wararka ka imaanaya dalka Jamhuuriyadda Carabta shacbiga Liibiya ayaa sheegaya in dalkaasi haatan uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee ay ummadda Soomaaliyeed ay ka soo gaaraan dhibaatooyin dhinacyo badan taabanaya.Masuuliyiin Soomaaliya iyo dunidaba caan ka ah oo isku khilaafay waxa laga yeelayo dadka Soomaaliyeed ee baaba . war bixin la xariirta hab dhaqanka Dowladda Liibiya ee …iyo waxa walaalka Soomaaligoow arrintaan kaala quman xal ahaan?
Wararka ka imaanaya dalka Jamhuuriyadda Carabta shacbiga Liibiya ayaa sheegaya in dalkaasi haatan uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee ay ummadda Soomaaliyeed ay ka soo gaaraan dhibaatooyin dhinacyo badan taabanaya.
Dowladda Liibiya oo la oron karo waa dowladda kali ah oo dagaallo kasta iyo qax kasta oo ka dhacay dalka Soomaaliya mudaddii dowlad la,aanta aan dhinacna uga bixin dalka dhibaatada haysatayna la qayb sanaysay ummadda Soomaaliya ,muddadaasina ay Muqdisho joogeen howl wadeenno heer safaaradeed oo kale u shaqaynayay tasiilaad kala duwanna fidinayay.
Iyadoo ay jiraan abaalladaasi ay dowldda iyo shacbiga Liibiya ku leeyihiin Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa dhinaca kalana soo baxaya warbixinno muujinaya in shacbiga Soomaaliyeed ee dalkaasi u qaxay miciinkana biday ay kala kulmaan dalkaasi Liibiya dhibaatooyin dhiniacyo badan taabanaya.
Dhibaatooyinkaan ayaa qaarkood yihiin in iyadoo ay shacbiga Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin carruur.haween uur leh ,dhallinyaro.iyo nuucyo kale ay ku harqadeen kuna baaba,aan biyaha u dhaxeeya Liibiya Talyaaniga.
Dhibaatooyinkaan Bado ku harqashada intooda badan waxaa dusha loo saarayaa Shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan maadaamaa ay ku heshiin waayeen in ay dhistaan dowlad laysku raacsan , halka qaarkoodna ay badahaaasi isku tuurayaan,iyagoo tahriib ah wax sharci ahna aan haysan.
Marka la eego warbixinnada la xariira in shacbigaasi Soomaaliyeed ee dhibaataysan .dhibaatooyin loogugu gaysnayo dalka Liibiya gudihiisa ayaa ah mid aan la qaadan Karin burush qashin lehna maraysa dadaalkaasi taageerada walaalnimada dhinacyada badan ee Hogggaamiyaha Shacbiga Liibiyaha Mucaamar Al Qadaafi iyo xukuumadda uu madaxda ka yahayba u fidiyeen ama u fidinayaan Ummadda Soomaaliyeed.
Warbixinno badan oo naga soo kala gaaraya dalka Liibiya gudihiisa lagana soo kala xiganayo ehelada dad badan oo lagu xirxiray gudaha dalka Liibaya ayaa waxaa cabashooyinka ka mid ah in Askar ka tirsan Dowladda Liibiya ay Xabsiyada ku xirxiraan dadka ay Soomaalida u aqoon sadaan.
Askartaan Liibiyaanka ah ayaa warbixinnadu waxay sii caddaynayaan in marka ay dadkaasi aan dambiyada galin ee ay iska soo qabqabteen ay muddo hayaan iyadoo aan wax maxkamad ahna aan la saarin ay u sheegaan maxaabiistii kuna yiraahdaan haddii aad rabaan in laydin sii daayo la hadla kharaabadiinna joogta Soomaaliya iyo duniada kale dacaladeedaba ,tafeennadaanna ha ku soo direen lacago ay tiradoodu inta badan dhan tahay boqolaal doolar $ 600 doolar iwm .
Arrintaan ayaa horseedda sida ay warbixinnadu caddaynayaan in kharaabada ama ehelada dadkaasi xirxiran ay isku howlaan sidii ay lacagtaasi baadda iyo maxbuus furashada u heli la,aayeen iyadoo qaarkood ayba ku culus tahay in lacag baad ah oo qaabkaasi ku bixiyaan meesha ka saare ay ku adag tahay in ay helaan nolol maalmeedkooda.
Askarta Dalka Liibiya ayaa warbixinnadu waxay intaasi sii raacinayaan in marka lacagtaasi baadda ah ay gaarto ay iska sii daayaan dadkaasi iyadoo aysan jirin wax maxkmad ah oo la saaray ,taasna ay ugu sii xigto in dadkaasi ay markii xabsiyadaasi laga sii daayo lacagtaasi baadda ahna laga qaado ay ku tahriibaan badda khatarta badan ee isku xirta Liibiya iyo Talyaaniga taas oo in badan oo dadkaasi ka mid ahi ay baddaasi laqdo oo xataa maydadkooda la waayo.
Runtii waan jeclaan lahayn in inta aanan daabicin warbixinnaan aan la xariirno waxna ka waydiinno madaxda Safaaradda Jumhuuiyadda Shacbiga Carabta Liibiya ay ku leedahay Magaalada Muqdisho waase inoo suurto gali wayday waanna ka cudur daaranaynaa wax kasta oo qalad tabasho ah oo dhinaceenna laga dareemo.
Dhinaca kale dhibaatooyinka bad ku harqanku ay ugu horreeyaan ee Shacbiga Soomaaliyeed ay kala kulmayaan dalka Liibiya iyo deegaanna la xariira ayaa warbixinno na soo gaaray wabsayd ahaan waxaa ay muujinayaan in Masuuliyiin Soomaaliyeed oo caan ka ah dalka Soomaaliya gudihiisa iyo Dibaddiisaba ay isku khilaafeen sida xal loogaga gaari karo dhibaatooyinkaasi.
Masuuliyiintaan oo kala ah Madaxweynihii Dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Carte lagu soo dhisay Dr Cabdiqaasin Salaad Xasan iyo Raysul Wasaaraha xukuumadda Fedaraalka ee Waqtigaan nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde)
Sida ay warbixinnadu nagu soo gaarayaan khilaafkaan ayaa yimid ka dib markii Madaxweynihii Dowladdii Carte Dr Cabdiqaasin Salaad Xasan uu isku dayay in Dowladda Liibiya uu ka codsado in dadka Soomaaliyeed ee ku sagan dalka Liibiya dhammaantood loo soo celiyo dalkoodii hooyo dhibkasta oo ay ku qabaanba,xukuumadda Nuur Caddana uu arrintaasi taageero kaga helo, uuna khilaafku yimid markii Raysul Wasaare Nuur Cadde uu istaagay mowquf kaas ka duwan oo ah in dadkaasi aanay habboonayn waqtigaan la yiraahdo ha lagu celiyo dalkoodii.
Raysul Wasaare Nuur Cadde ayaa warbixinnada na soo gaaray waxaa ay sheegayaan in uu aaminsan yahay in marka hore ay habboon tahay in la xalliyo dhibaatooyinka ay ka ka carayaan dadkaan Soomaaliyeed .markii xal dhibaatada dalka ka taagan loo helana ay sahlanaanayso soo noqoshadooda kuwii horay u cararay kuga kalana ay joogi doonaan dalkooda Hooyo.
Marka aan dib u xusuusanno dhibaatooyinka shacbiga Soomaaliyeed ka soo gaaraya dalka Liibiya gidihiisa iyo badaha u dhaxeeya Liibiya iyo Talyaaniga meelaha ay ka midka yihiin iyo isku khilaafka 2da oday caan sidii xal loogu heli lahaa dhibaataan, maxayna adiga kula tahay marka la eego dhibaatadu heerk a ay gaarsiisan tahay,2da oday midka kula saxan iyo sida Dowladda Liibiya loogaga dhaadhicin karo in Taariikhdeeda kaalmayn ee Ummadda Soomaaliyeed saxarka loogaga ilaaliyo askarteeduna ay u joojin lahaayeen dhaqaale ka aruursashada dadkaasi qaxootiga xalka mooday.